Happy Birthday MrDBA — MYSTERY ZILLION
Happy Birthday MrDBA
-MrDBA (born in 1973, Age: 36)
ပျော်ရွင်သောမွေးနေ ့ဖြစ်ပါစေဗျား ကို MrDBA ကြီးရေ :6::6::6:
Happy birthday ပျော်စရာမွေးနှေု့ ဖြစ်ပါစေ ကိုဒီဘီ
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာဆီသို့ ............ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
Happy Birthday brother! Haveawonderful day!
Happy Birthday ကဒီဘီကြီး...
PM ပို့ပြီး အစောကြီး ဆုတောင်းထားတယ်... :67:
ကိုကြီး ဒီဘီရေ ...
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်စရာအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းနိုင်ပါစေဗျာ ... ကလေးလည်း မြန်မြန်ရပါစေဗျာ ....
ကိုဒီဘီကြီး ယခုနှစ်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်ရှည်ရှည် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါစေဗျာ....
Happy Birthday! ဒါနဲ့ဆို သုံးခါရှိပြီထင်တာပဲနော်
Happy Birthdayပါ:6::6: ကိုကြီး MrDBA!
သက်ရှည်ကျန်းမာပြီး ကြီးပွားတိုးတက် နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်:79:
မွေးနေ ့မှ မင်္ဂလာ အပေါင်း ခါးညောင်းပါစေ ဗျာ .. အဲ ခညောင်းပါစေဗျာ.....
မွေးနေ့မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ သက်ရှည် ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး ပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်ရုံမက တရားဘာ၀နာအားထုတ်နိုင်၍ နိဗ္ဗာန် သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေသော်၀် ... သူမတူတဲ့ ဆု တောင်းပေးလိုက်ပြီ :D:D
ကိုကြီးဒီဘီရေ မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သားသားမီးမီးလေးအမြန်ဆုံးရပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ဗျာ။
အတိုင်းထက်အလွန် ဟက်ပီးရသော ဘာ့(သ်)ဒေးဖြစ်ပါစေသတည်း... ဖြစ်စေသတည်း... အမောင် ကဒီဘီကြီး...။
အနည်းငယ်နောက်ကျသွားခြင်းကို ခွင့်လွှတ်စေသတည်း... အမောင် ကဒီဘီကြီး...။
မရတာကိုတော့ သိပ် သိပ်ပြီး မကြိုးစားပါနဲ့တော့ အမောင် ကဒီဘီကြီး...။ :d:d:d:d
H4ppy Birthday, Mr DBA
ဟက်ပီးဘက်ဒေး တောင်သူ ဦးလေးကြီးးးး
happy birthday ပါခင်ညာ့ အနော်က ဒါနဲ့ဆို နှစ်ခါ။ ကိုလူပျိုကြီးကို အားကျမခံပေါ့။
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ကိုဒီဘီရေ ........ :5:
[FONT=&quot]♫♪[/FONT] .... [FONT=&quot]♫♪[/FONT]
Happy Birthday to Uuuuuuuuuuuu ~~~ May God bless U always
ဟီး ညီဆုတောင်းတာနောက်ကျသွားတယ် မနေ့က အလုပ်နားတော့ မသိလိုက်ဘူး ... မွေးနေ့မှစနှစ်ပေါင်းများစွာ ဆည်းလည်းလေးတွေရပြီး ဆည်းလည်းသံလေးတွေ လှိုင်လှိုင်နဲ့ နေရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် :d
ဆောရီးပါ ကိုဒီဘီအေ ရေ
အင်း....၃၆ နှစ်တောင် ရောက်ပါပကောလား။
ယခုမှ စပြီး ကျွန်တော့် အစ်ကိုကြီး အသက် ၃၆၀ တိုင် ကျန်းကျန်းမာမာ ရွှင်ရွှင် လန်းလန်း ဝဝ ခန့်ခန့်ကြီး ဖြစ်ပါစေဗျား။
(ကိုယ်က နောက်ကျနေတော့ ရှေ့က လူတွေနဲ့မတူအောင် လည်း ဆုတောင်းရသေးတယ် :d)
ဒါနဲ့ မွေးနေ့မှာ ညီလေးတွေကို ဟင်းလက်သုတ်နဲ့၊ ချဉ်ပေါင်မွှေလေးနဲ့၊ ငါးနီတူ သုတ်လေးနဲ့ ဒါနလေးများ ပြုချင်ဘူးလား။
ရခိုင် လက်ရာ ထမင်း၊ဟင်း ငတ်နေတာကြာပေါ့။
Happy Birthday Mr.DBA,
၃၆ နှစ်လို့ မထင်ရဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်စိတ်ထင် ကျွန်တော်တို့ထက်ကြီးလှ ၅ နှစ်လို့ထင်ထားတာဗျ။ ဒီမွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း 80 လောက် (အသက် ၁၂၀ လောက်)အထိ ဆည်းလည်းသံ တချွမ်ချွမ်နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေ နိုင်ပါစေဗျာ။ \_:D/\_:D/\_:D/
၀ုတ်ပ့ ၀ုတ်ပါ့ :D:D
"Happy Birthday My Brother"
MrDBA (born in 1973, Age: 36)
Happy Birthday ဆြာဒီဘီ။
နောက်ကျသွားတယ်ဗျာ.. ဒီနေ့ မှ နယ်က ပြန်ရောက်လာလို့... တစ်ရက်နောက်ကျပြီးတော့ Happy Birthday လုပ်လိုက်တော့...
တစ်ရက်တိုး ပြီး ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ...ဟဲဟဲ...
Happy Birthday ပါ ကို ဒီဘီ...
my i wish uavery happy birthday and very pleasant life forever.
Happy birthday.........Mr DBa........
နောက်ကျနေပီ.. ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ကိုဒီဘီအေ ခင်ဗျား... :63: